Hiob 5 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
5 “Frɛ hwɛ ɛ! Obi wɔ hɔ a obegye wo so anaa?Na akronkronfo no mu hena na wobɛdan akɔ ne nkyɛn? 2 Ateetee na ebekum ɔkwasea,Na anibere na ebekum ogyimfo. 3 Me ara mahu ɔkwasea a ɔregye ntini,+Nanso medomee ne tenabea ntɛm so. 4 Ne mma ne nkwagye ntam ware,+Na wɔpɛtɛw wɔn wɔ kurow apon ano a wonnya ogyefo. 5 Nea otwa no, nea ɔkɔm de no na obedi;Nea wasina mpo, obi beyi awe,Na afiri bɛtow asɔw n’asetenade. 6 Efisɛ bɔne mfifi mfutuma mu,Na ɔhaw mfifi mfi fam. 7 Wɔwoo onipa maa ɔhawSɛnea ogyaframa tutu kɔ soro no. 8 Nanso sɛ me a, anka mɛsrɛ Onyankopɔn,Anka mede m’asɛm bɛhyɛ Onyankopɔn nsa,+ 9 Ɔno na ɔyɛ nneɛma akɛse a enni hwehwɛbea,Na ɔyɛ anwonwade a enni ano;+ 10 Ɔno na ɔma osu tɔ gu asase so+Na ɔma mfuw nya nsu;+ 11 Ɔno na ɔde abrɛfo tena nea ɛkorɔn,+Na ɔpagyaw wɔn a wodi awerɛhow kɔ nkwagye kwan so; 12 Ɔno na ɔsɛe anitefo agyina+Sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn nsa ntumi nyɛ adwuma yiye; 13 Ɔno na ɔkyere anyansafo wɔn ankasa anifere mu,+Ma anitefo agyina sɛe,+ 14 Na esum duru wɔn awia,Na awia ketee, wɔde wɔn ti pempem te sɛ nea ade asa no;+ 15 Ɔno na ogye onipa fi anitefo anom nkrante ano,Na ogye ohiani fi ɔhoɔdenfo nsam,+ 16 Na ɔma ɔbrɛfo nya anidaso,+Na amumɔyɛfo ka wɔn ano tom.+ 17 Hwɛ! Anigye ne onipa a Onyankopɔn ka n’anim;+Ade nyinaa so Tumfoɔ nteɛso nso, mpo! 18 Ɔno na opira, nanso ɔkyekye kuru no;Ɔno na obubu, na ɔno ara nsa sa yare. 19 Ahohia asia mu na obegye wo,+Na ason mu nso, bɔne bi renka wo.+ 20 Ɔkɔm bere mu, obegye wo afi owu mu,+Na ɔko bere mu nso, obegye wo afi nkrante ano. 21 Ɔde wo behintaw afi tɛkrɛma mpire ano,+Na sɛ afowfo ba a, worensuro. 22 Wobɛserew afowfo ne ɔkɔm,Na worensuro asase so akekaboa. 23 Efisɛ wuram abo ne wo bɛyɛ apam,Na wɔbɛma wuram akekaboa mpo ne wo atena asomdwoe mu.+ 24 Wubehu sɛ asomdwoe yɛ wo ntamadan;Na wobɛkɔ akɔhwɛ wo mmoa adidibea, na worenhwere biribiara. 25 Wubehu sɛ wo mma dɔɔso+Na w’asefo te sɛ asase so wura.+ 26 Wode ahoɔden na ɛbɛkɔ ɔdamoa mu+Sɛnea wɔboaboa awi ano wɔ ne bere mu no. 27 Hwɛ! Eyi na yɛahwehwɛ mu ahu. Saa na ɛte.Tie, na wo nso hu fa.”